Nu Myat around the World – NU MYAT AROUND THE WORLD
Tag: Nu Myat around the World
March 23, 2022 Posted in Europe, Heritage, TravelTagged culture, Europe, Nu Myat around the World, TravelLeaveacomment
November 21, 2017 April 22, 2021 Posted in Adventure, Asia, Heritage, Travel, UncategorizedTagged Asia, Mt.Everest, nepal, Nu Myat around the World, Travel1 Comment
🌳မြတ်စွာဘုရား ဖွားတော်မူရာ လုမ္ဗိနီဥယျာဉ်ကြီးရှိရာ…
🏔ဧဝရက်တောင်အပါအဝင် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင် ၈တောင်ရှိရာ..
🏯ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တိုင်း သွားရောက်ဖူးမြော်သင့်တဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးရှိရာ…
👸ကုမ္မာရီလို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာ့တစ်ဦးတည်းသော သက်ရှိနတ်ဘုရားမကိုးကွယ်ရာ…
နီပေါနိုင်ငံဟာ အရမ်းလည်းလှသလို အရမ်းလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်…
-ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ဖွားမြင်ရာနေရာကို ဖူးမြော်ခဲ့ရတယ်
-နှင်းတွေဖုံးနေတဲ့ ရေခဲတောင်တန်းကြီးကိုကြည့်ရင်း နိုးထလာခဲ့ရတယ်…
-ဟိမဝန္တာတောင်တန်းတွေကြား Paragliding လုပ်ပြီး ငှက်လိုလေဟုန်စီးခဲ့ရတယ်…
-ဧဝရက်တောင်နဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင့်တကာအမြင့်ဆုံး ရေခဲတောင်တွေပေါ်ကနေ Mountain Flight စီးခဲ့ရတယ်…
ဒီအတွေ့အကြုံတွေက ဘယ်လိုမှ မေ့မရနိုင်မယ့် ဘဝမှတ်တိုင်တွေလို့ ဆိုရမှာပါ
နီပေါနိုင်ငံက မြန်မာတွေအတွက်မစိမ်းတဲ့နိုင်ငံပါ။ ရဲရင့်တဲ့ ဂေါ်ရခါးစစ်သည်တွေကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က အင်္ဂလိပ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံကို ခေါ်ဆောင်လာလို့ ဂေါ်ရခါးမျိုးဆက်တွေ မြန်မာမှာ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားဖွားတော်မူရာ လုမ္ဗိနီဥယျာဉ်တော်ကြီးဆီ ဗုဒ္ဓဂါယာ ဘုရားဖူးသွားရင်းလည်း ရောက်ဖူးကြမှာပါ။
နိုင်ငံမြောက်ဘက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီးခြားထားပြီး တောင်ပိုင်းမှာတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ ထိစပ်နေတာပါ။ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ဒုတိယအများဆုံးပါ။ နီပေါရဲ့ အလံကလည်း ထူးဆန်းလှပါတယ်။ တြိဂံ၂ခုဆင့်ထားတဲ့ ပုံစံဖြစ်နေလို့ ကမ္ဘာ့တစ်ခုတည်းသော ထောင့်မှန်စတုဂံပုံ မဟုတ်တဲ့ အလံလို့ ဆိုရမှာပါ။
ဟိမဝန္တာတောင်တန်းတွေဝန်းရံထားတဲ့ ချိုင့်ဝှမ်းထဲက မြို့တော်ခတ္တမန္ဒူဟာ ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဘုရားကျောင်းတွေ အဆောက်အအုံတွေနဲ့ လဟာပြင်ပြတိုက်တစ်ခုလိုပါပဲ။ မြို့က ငလျင်ကြောမှာရှိလို့ တိုက်တွေ သိပ်မမြင့်ဘူးရယ်။ ကြည့်လိုက်တိုင်း ၂ ထပ် ၃ ထပ်လောက်ပဲရှိကြတာ။ အထပ်အမြင့်ဆုံးရယ်မှ ၁၇ထပ်တဲ့လေ။
-ခတ္တမန္ဒူမှာက ဗုဒ္ဓနတ်(Buddhanath) လို့ခေါ်တဲ့ စေတီပုထိုးရှိတယ်။ ထူးခြားတာက စေတီပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓမျက်လုံးလို့ခေါ်တဲ့ ဧရာမမျက်လုံး၂လုံးကို လေးဘက်လေးလန်မှာ ရေးဆွဲထားပြီးခလယ်မှာ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ9လိုပုံရှိတဲ့ နီပေါလို နံပါတ် ၁ ကို နှာခေါင်းအဖြစ်ရေးဆွဲထားတယ်။ တရားရတော်မူရာ Enlightenment သင်္ကေတလို့သိရပြီး ဒါကြောင့် တတိယမျက်လုံးလို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ နီပေါရဲ့ဘုရားတွေမှာတွေ့ရလေ့ရှိပြီး နီပေါနိုင်ငံရဲ့ သင်္ကေတလို့လည်း ဆိုရမှာပါ။ ဘုရားဝန်းကျင်မှာ တိဘက်လူမျိုးတွေ နေများလို့ Little Tibet လို့လည်း ခေါ်ကြတယ်တဲ့။
-တောင်ထိပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဆွာယန်ဘူနတ်စေတီ Swayambhunath temple မှာ မျောက်တွေများလို့ Tourist တွေကြား Monkey Temple လို့လည်းခေါ်ကြတယ်။ အဲ့တောင်ကုန်းပေါ်တက်တဲ့ ဘုရားစောင်းတန်းလှေကားထစ်ပေါင်း ၃၆၅ထစ်ရှိပြီး တောင်ပေါ်က မြင်ရတဲ့ ခတ္တမန္ဒူမြို့ရှုခင်းကလည်း အရမ်းလှတယ်။
-ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေ အထွတ်အမြတ်ထားရာ ပရှူးပသီနတ် (Pashupathinath) ဘုရားကျောင်းဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ်။ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တိုင်း ဘဝမှာတစ်ကြိမ်ရောက်သင့်တဲ့ ဘုရားကျောင်းလို့ဆိုပါတယ်။ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေ သေဆုံးတဲ့အခါ အလောင်းတွေကို အဲ့ ဘုရားကျောင်းဘေးက ဘက်ဂ်မာတီ (Bagmati) မြစ်ကမ်းမှာ မီးသဂြိုဟ်လေ့ရှိပြီး ပြာတွေ မြစ်ထဲမြောချလေ့ရှိကြတယ်။ အဲ့မြစ်ကိုလည်း Holy River အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး အဲ့လို သဂြိုဟ်ခြင်းအားဖြင့်နောင်ဘဝရှိမလာတော့ပဲ သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲကနေကင်းလွတ်တယ်လို့ အဆိုရှိကြတယ်။
ပရှူးပသီနတ် ရောက်တုန်းလွှင့်ခဲ့တဲ့ Live Video link https://www.facebook.com/numyataroundtheworld/videos/1836358436603517/
-ဘက်ခ်တာပါဒါဘာရင်ပြင် (Bukdapur Durbur Square) ကတော့ ခတ္တမ္ဒူကနေ ၁နာရီလောက်ကားမောင်းရင်ရောက်တဲ့ ဘက်ခ်တာပါမြို့မှာ ရှိတဲ့ ရင်ပြင်ပါ။ နီပေါနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော်ဟောင်း ဖြစ်ပြီး နန်းတော်ဟောင်းလည်းတွေ့မြင်ရမှာပါ။ ၂၀၁၅တုန်းက နီပေါမှာ လှုပ်ခဲ့တဲ့ ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံတွေ အများကြီး အုတ်ပုံဘဝရောက်နေတာ မြင်ရတော့ စိတ်မကောင်းဘူးရယ်။ မြို့ထဲမှာ Kathamandu နဲ့ Patan ဆိုတဲ့ ရင်ပြင်တွေ ရှိသေးတယ်။ ကံကောင်းရင် ကမ္ဘာ့တစ်ပါးတည်းသော သက်ရှိနတ်ဘုရားမ ကုမ္မာရီနေတဲ့ အဆောက်အအုံပြတင်းပေါက်ကနေ နတ်ဘုရားမ လက်ပြနှုတ်ဆက်တာကို မြင်တွေ့နိုင်တယ်။
-Thamel ဆိုတဲ့နေရာကတော့ နေ့ရောညပါ စီကားတဲ့ ဈေးဆိုင်တန်းတွေရယ်ပါ။ ညဘက်ဆို နီပေါ Nightlife ကို အဲ့မှာ ခံစားလို့ရတယ်လေ။
-ဧဝရက်တောင်အပါအဝင် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်၈ခုကို လှမ်းမြင်ရအောင် သီးသန့်ထွက်ပေးတဲ့ Mountain Flight ဆိုတာလည်းရှိတယ်။ လေဆိပ်ကနေ ထွက်ပေးတာ။ တစ်ယောက်ကို $200 ကျတယ်။
Mountain Flight Video Link က ဒီမှာပါ။https://www.facebook.com/numyataroundtheworld/posts/1838824249690269
Maya Manor Boutique Hotel လေးက မြို့ထဲမှာရှိပြီး ဟိုတယ်ဆောက်ထားပုံလေးက ချစ်စရာပါ။ ဈေးလည်း သင့်တင့်ပါတယ်။
ပိုခါရာမြို့လေးက မြို့တော် ခတ္တမန္ဒူပြီးရင် ဒုတိယမြောက်Tourist အလာဆုံးမြို့ပါ။ မြို့လေးက အရမ်းကိုလှပါတယ်။ ဟိမဝန္တာတောင်တန်းတွေအလယ်က ရေကန်ကြီးဘေးမှာ ဆောက်ထားတဲ့မြို့လေးဆိုတော့ ရှုခင်းတွေက တအားလှပေါ့…
ရေခဲတောင်တွေကို မြို့ထဲကနေလှမ်းမြင်ရသလို တောင်တွေကြားထဲက နေထွက်လာတဲ့ ရှုခင်းတွေကလည်း အရမ်းလှပါတယ်။ Sunrise၊ Sunset ကြည့်လို့ရတဲ့ View Point တွေလည်း အများကြီးရှိလို့နေပါတယ်။ ဆာရန်ကော့တောင်ကတော့ Sunrise ကြည့်ဖို့ နာမည်ကြီးပါတယ်။
ပိုခါရာမြို့လေးကတော့ Adventure မြို့တော်လို့ဆိုရမှာပါ။ အဲ့မှာ တောင်တွေပေါ်ကနေ လေဟုန်စီးနိုင်တဲ့ Paraglidingလုပ်နိုင်သလို ကောင်းကင်ပေါ်ကနေ ရှုခင်းကြည့်နိုင်တဲ့ Pilot နဲ့ကိုယ်နဲ့ ၂ယောက်ထဲစီးရတဲ့ Ultralight Flight နဲ့ ရေခဲတောင်တွေပေါ်ဖြတ်ပြီး ပျံသန်းတဲ့ Mountain Flight ဆိုတာလည်းရှိတယ်။ တောင်တွေလည်းများတော့ Trekking တို့ Hiking တို့လည်း လုပ်လို့ရတယ်။ Annapura ရေခဲတောင် Base Camp ကိုလည်း အသွားများကြတယ်။
မြို့လည်ရှိ Phewa ရေကန်ကြီးထဲ ခြေနင်းလှေစီးလို့ရသလို လှေလှော်လို့လည်းရတယ်။ ရေစီးသန်တဲ့ မြစ်တွေထဲလည်း Rafting လုပ်လို့ရတယ်။
Paragliding လုပ်တဲ့ Video က ဒီမှာပါ။ https://www.facebook.com/numyataroundtheworld/videos/1839864816252879/
Paragliding လုပ်တဲ့ Review ကတော့ ဒီမှာပါ။
Raniban Retreat နဲ့ Himalaya Front Hotel တို့က တောင်ပေါ်မှာ ရှိလို့ မြို့အလှကို အပေါ်စီးက လှမ်းမြင်ရတယ်။ အဲ့က မြင်ရတဲ့ နေထွက်ချိန်ရှုခင်းတွေက သိပ်လှတာပဲ။ ရေခဲတောင်တွေကိုလည်း လှမ်းမြင်ရတယ်လေ။
Fishtail Resort နဲ့ Waterfront Hotel တွေကတော့ ရေကန်ဘေးမှာ ရှိပြီး ရာသီဥတုသာယာရင် ဟိုတယ်ကနေ ရေခဲတောင်တွေလှမ်းမြင်ရပါတယ်။
Temple Tree ဟိုတယ်ကတော့ မြို့ထဲမှာရှိပြီး သွားရလာရ လွယ်ကူပါတယ်။
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား ဖွားတော်မူရာ လုမ္ဗိနီဥယျာဉ်ရှိပြီး မြတ်စွာဘုရားမွေးဖွားတဲ့နေရာအစစ်ကို အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ကျောက်တုံးရယ်၊ ဗောဓိပင်ရယ်၊ မယ်တော်မာယာမီးဖွားခါနီးကိုယ်လက်သန့်စင်ရာ၊ မီးဖွားပြီးသိန္ဒဿမင်းသားကို ဆေးကြောသန့်စင်ရာ ရေအိုင်တော်ရယ်၊ မယ်တော်မာယာဒေဝီကျောင်းဆောင်ကြီးရယ်၊ အာသောကမင်းကြီး တည်ထားခဲ့တဲ့ ကျောက်စာတိုင်ရယ် ရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သွားရောက်ဖူးမြော်သင့်တဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ နေရာပါ။
Lumbini Hokke Hotel အခန်းတွေက ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိပါတယ်။ ဂျပန်တွေအတည်းများတော့ ဂျပန်စတိုင်အခန်းလေးတွေလည်းရှိတယ်။
မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေလည်းရှိပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတည်းမယ်ဆိုရင် မြန်မာငွေ ၅၀၀၀ ပဲလှူရမှာပါ။ သက်သက်လွတ်ထမင်းဟင်းတွေပါကျွေးပါတယ်။
ခတ္တမန္ဒူကနေ ၁နာရီလောက်မောင်းရင်ရောက်တဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးပါ။ နေဝင်နေထွက်ရှုခင်းတွေ အရမ်းလှတယ်လို့ နာမည်ကြီးပါတယ်။ မြို့လေးသွားတဲ့တောင်ပေါ်လမ်းလေးက ထင်းရှုးပင်လေးတွေနဲ့ သိပ်ကိုလှပါတယ်။
ဒီမြို့မှာလည်း Hiking, Mountain Biking, Paragliding စတဲ့ Activities တွေ လုပ်လို့ရပါတယ်။
Hotel Country Villa Resort ဆိုတဲ့ ဟိုတယ်လေးရွေးသင့်ပါတယ်။ ရှုခင်း တမြော်တခေါ်ကြီး မြင်ရတဲ့ တောင်စောင်းပေါ်ဆောက်ထားပြီး ဈေးကလည်း $80-100 လောက်ပါပဲ။
Himalaya Club ဟိုတယ်ကတော့ အခန်းတွေပိုကျယ် ပိုကောင်းပြီး View တွေလည်း သိပ်ကိုလှပါတယ်။ ရေကူးကန်ကြီးလည်းရှိတယ်။ ဈေးကတော့ $160 လောက်ရှိမယ်။
တောင်စောင်းက အိမ်လေးတွေမှာ Homestay လည်း နေလို့ရလောက်တယ်။ လမ်းတလျှောက် Homestay ဆိုပြီး ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေ တွေ့ရလို့ပါ။
ဒီမြို့ကလည်း ခတ္တမန္ဒူမြို့ကနေ ၁နာရီကျော်လောက်စီးရုံနဲ့ရောက်တယ်။ Cable Car စီးပြီးတောင်အမြင့်ကြီးပေါ်တက်ရတာ။ တောင်ပေါ်မှာ ဘုရားကျောင်းရှိပြီး တောင်ပေါ်က မြင်ရတဲ့ရှုခင်းတွေက အရမ်းကိုလှတာ။ တောင်ပေါ်က ကော်ဖီဆိုင်မှာ အေးအေးဆေးဆေး Lunch စား နီပေါစတိုင် မာဆလာလက်ဖက်ရည်လေးသောက်နဲ့ ဇိမ်ကိုကျနေရော။ နောက်ဆို ကစားကွင်းတွေ Zipline တွေလည်း လုပ်ဦးမှာဆိုတော့ ပိုပြီး ပျော်ဖို့ကောင်းမှာပါ။
ချန်ဒရာဂီရိ Live Video က ဒီမှာပါ
နီပေါနိုင်ငံ ခတ္တမန္ဒူမြို့နဲ့ ရန်ကုန်ကို Himalaya Airlines ကနေ တိုက်ရိုက်ပြေးဆွဲနေပါပြီ။ လေယာဉ်ပျံသန်းချိန်က ၃နာရီနီးပါးရှိပြီး အသွားအပြန်မှ US$350 ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိပါတယ်။
ခတ္တမန္ဒူကနေ ပိုခါရာကို လေယာဉ်စီးရင်စီး၊ မစီးရင်ကားနဲ့သွားလို့ရပါတယ်။ ကားက Tourist Bus ဆိုတဲ့လိုင်းကားရှိတယ်။ ကားအမျိုးအစားနဲ့ Service ပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးက 7$ ကနေ $25 ထိရှိတယ်။ $25 တန်ဆိုရင် ကားပေါ် အိမ်သာပါသလို lunch လည်းကျွေးပါသတဲ့။ ကားစီးချိန်ကတော့ ၇နာရီလောက်ကြာပါမယ်။
လုမ္ဗိနီဆီကိုတော့ ပိုခါရာကနေ ကားနဲ့သွားမှရပါမယ်။ ခတ္တမန္ဒူကဆိုရင်တော့ လေယာဉ်လည်းရှိပါတယ်။
နီပေါစာက အိန္ဒိယအစာနဲ့ ဆင်ပါတယ်။ ထမင်းနဲ့ ကြက်သားဟင်း အဓိကစားပြီး ပဲဟင်းအစားများပါတယ်။ ထမင်းကို ဒိန်ချဉ်စမ်း ဆားနဲ့နယ်စားရတာ သိပ်အရသာရှိတာပဲ။ စမူဆာတွေကလည်း အကြီးကြီး၊ ပူရီ၊ ချာပါတီ၊ နံပြား စားလို့ကောင်းမှကောင်း။ အထူးအဆန်းအနေနဲ့ Momo ဆိုတာ ဖက်ထုပ်ကို ပဲအနှစ်တို့စားရတာဖြစ်ပြီး တရုတ်နဲ့ကုလား ၂မျိုးပေါင်းထားတဲ့ Fusion လို့ဆိုရမှာပါ။ နီပေါမှာ မာဆလာလက်ဖက်ရည် Masala Tea ကိုတော့ အရမ်းကြိုက်သွားမိတယ်။ နေ့တိုင်း အဲ့ဒါပဲ မှာသောက်တာ။ လက်ဖက်ရည်ကို ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ရယ် နို့ရယ်ထည့်ကြိုပေးတာ သိပ်အရသာရှိတာပဲ။ Masala Cola ဆိုတာလည်းရှိတယ်တဲ့ ကိုကာကိုလာထဲ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် ထည့်သောက်တာတဲ့။ အဆန်းကြီးတွေနော်။
– US$ 1$ = နီပေါရူးပီး 102-108 လောက်ရယ်ပါ။ မြန်မာငွေတွက်မယ်ဆို နီပေါရူပီးကို အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် ၁၀နဲ့ မြှောက်ရုံပဲပေါ့ ။ ဒေါ်လာအကြွေတွေရှိလည်း ဆောင်သွားပါ။ ဒေါ်လာနဲ့ ပေးလည်း လက်ခံကြပါတယ်။
-Visa က လေဆိပ်မှာ Arrival Visa လျှောက်လို့ရပါတယ်။ 25$ ပါ။ Passport ပုံ လိုပါလိမ့်မယ်။
-Passport ဓာတ်ပုံ အပိုဆောင်သွားပါ။ ဖုန်းကတ်ဝယ်ရင် ပုံပေးပြီး ဖောင်ဖြည့်ရပါတယ်။ ဖုန်းကတ်ကို လေဆိပ်မှာပဲဝယ်ပါ။ မြို့ထဲမှာ ရှာရခက်ပါတယ်။ 100 MB ကို 800ရူပီး နဲ့ 300 MB ကို 1000ရူပီး ကျပါတယ်။
– တောင်တွေ ထူထပ်တဲ့ နိုင်ငံမို့လို့ ရာသီဥတုအေးပါတယ်။ နွေးနွေးထွေးထွေးဖြစ်စေမယ့် အဝတ်အစားတွေ ယူသွားပါ။ ညဆိုတော်တော်အေးပါတယ်။ အိန္ဒိယနဲ့ နီးတဲ့ လုမ္ဗိနီမြို့မှာသာ ရာသီဥတုနွေးပါတယ်။
-လေယာဉ်စီးရင် အသွား ညာဘက်၊ အပြန်ဘက်ဘက် Window seat မှာစီးပါ။ ရာသီဥတုကြည်လင်တဲ့ အချိန်ဆို ဧဝရက်တောင်အပါအဝင် ရေခဲတောင်တွေကို လေယာဉ်ပေါ်ကနေ တမြော်တခေါ်ကြီး လှမ်းတွေ့ရမှာပါ။
-လေယာဉ်က တစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ်ပဲထွက်တော့ ၇ညအိပ် ၈ရက်ခရီးသွားရပါမယ်။ အဲ့ရက်နဲ့ဆို အပေါ်မှာ ပြောထားတာတွေ အကုန်ရောက်ပါတယ်။ တချို့ကတော့ ၂နိုင်ငံဖြစ်အောင် နီပေါနဲ့ နီးတဲ့ ဘူတန်ကိုပါ တွဲသွားပါတယ်။
အပြီးထိ စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ရှုလို့ ကျေးဇူးပါ။ အားလုံး စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါနိုင်ကြပါစေ။
November 18, 2017 April 20, 2021 Posted in Europe, Heritage, Leisure, Travel, UncategorizedTagged Cakes, Europe, food, Nu Myat around the World, TravelLeaveacomment
ဥေရာပအလယ္ပိုင္း ကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ၾသစၾတီးယား (Austria) ႏိုင္ငံရဲ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ ဗီယာနာကို ဂီတျမိဳ႕ေတာ္လို႕ အသိမ်ားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အျခားျမိဳ႕ေတြထက္စာရင္ ဗီယာနာမွာ နာမည္ေက်ာ္ဂီတပညာရွင္ေတြ ေနထိုင္ခဲ့ၾကလို႕ပါ။ ဂီတသမိုင္းတေလွ်ာက္ နာမည္အေက်ာ္ၾကားဆံုး ဂႏၳ၀င္ဂီတပညာရွင္ ၁၀ေယာက္မွာ ၄ေယာက္က ဗီယာနာျမိဳ႕မွာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ မိုးဇက္၊ ဗီသိုဗင္၊ ဂ်ိုးဇက္ေဟဒန္၊ ဖရန္႕ဇ္ရွဳဘတ္ဇ္စတဲ့ ဂီတပညာရွင္ ေတြဟာ ေရွးကတည္းက ၾသဇာၾကီးခဲ့တဲ့ ဗီယာနာျမိဳ႕မွာ အလုပ္လုပ္ရင္း ကမၻာ႕ဂႏၳ၀င္သီခ်င္းၾကီးေတြကို ေရးစပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဗီယာနာျမိဳ႕ဖြား ကမၻာေက်ာ္တစ္ေယာက္ရွိပါေသးတယ္။ အိပ္မက္ေတြအေၾကာင္းထဲထဲ၀င္၀င္ေလ့လာခဲ့တဲ့၊ စိတ္စိစစ္မႈကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာပါရဂူ ဆစ္ဂမန္ဖရက္ပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူ႕ကို အစြဲျပဳျပီး အိပ္မက္ျမိဳ႕ေတာ္လို႕လည္း ေခၚၾကပါတယ္။
ဗီယာနာက ဂီတျမိဳ႕ေတာ္ အျပင္ အကျမိဳ႕ေတာ္လို႕လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဗီယာနာျမိဳ႕ရဲ႕ Ball Dance အကက သိပ္ကိုနာမည္ၾကီးတာပါပဲ။ ခမ္းနားထည္၀ါလွတဲ့ ခန္းမက်ယ္ၾကီးမွာ ၀တ္စုံျပည့္၀တ္ထားျပီး စံုတြဲအလိုက္ စည္ခ်က္ညီညီကရတဲ့ ball dance က သိပ္ၾကည့္ေကာင္းပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ကို ကပြဲေပါင္း ၄၀၀ေက်ာ္ က်င္းပေလ့ရွိျပီး ႏွစ္စဥ္ အေရွ႕ပိုင္း၃လမွာ ကပြဲေတြပိုျပီး က်င္းပေလ့ရွိပါတယ္။ သံစံုတီး၀ိုင္းေတြ ျမိဳင္ျမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ေနာက္ခံျပီး ျမဴးျမဴးၾကြၾကြကေလ့ရွိတဲ့ ဒီWaltz အကဟာ ယေန႔ထက္တိုင္ထိန္းသိမ္းထားဆဲ ၾသစၾတီးယားရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ပါပဲ။
ဗီယာနာကို ၀ိုင္ျမိဳ႕ေတာ္လို႕လည္းေျပာၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဗီယာနာဟာ ကမၻာ့တစ္ျမိဳ႕တည္းေသာ ျမိဳ႕ေတာ္တြင္း ၀ိုင္ခ်က္လုပ္ရာျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပါ။ တစ္ႏွစ္ကို ၀ိုင္လီတာေပါင္း၂.၅သန္းေတာင္ခ်က္လုပ္ႏိုင္ပါသတဲ့။ ဗီယာနာ၀ိုင္လိုပဲ ဗီယာနာေကာ္ဖီလည္း သိပ္ေကာင္းပါတယ္။ ေရွးကတည္းကစခဲ့တဲ့ ေကာ္ဖီဆိုင္ယဥ္ေက်းမႈက ယေန႔တိုင္ပါပဲ။ ျမိဳ႕ၾကီးရဲ႕ လမ္းမေတြ လမ္းသြယ္ေတြမွာ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားစြာေတြ႕ရမွာပါ။ ေကာ္ဖီနဲ႔အတူ တြဲဖက္စားေလ့ရွိတာကေတာ့ ဗီယာနာျမိဳ႕ရဲ႕ အထင္ကရ Sacher tote လို႕ေခၚတဲ့ ေခ်ာကလက္ကိတ္ပါ။
ဗီယာနာဟာ အႏုပညာ၊ အစားအေသာက္မွာသာမက ဗိသုကာလက္ရာေတြလည္း ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာပါတယ္။ ျမိဳ႕လည္ရွိ City Center မွာ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားစြာကိုေတြ႔ရမွာပါ။ ျမိဳ႕လည္မွာ St.Stephen ဘုရားေက်ာင္း၊ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ေအာ္ပရာကဇာတ္ရံု၊ Hofburg နန္းေတာ္၊ Volksgarten ပန္းျခံအစရွိတဲ့ ခမ္းနားတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြ က်ယ္၀န္းတဲ့ပန္းျခံေတြ မ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ ဂီတပညာရွင္ မိုးဇက္ေနသြားခဲ့တဲ့အိမ္၊ စိတ္ပညာရွင္ ဆစ္ဂမန္ဖေရာ့ေနသြားခဲ့တဲ့ အိမ္ေတြကိုလည္း ျပတိုက္အျဖစ္ျပသထားလို႕ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။
ဗီယာနာျမိဳ႕ရဲ႕ အေက်ာ္ၾကားဆံုး အေဆာက္အအံုကေတာ့ ရႊန္းဘရြန္း (Schonbrunn) နန္းေတာ္ၾကီးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခန္းေပါင္း ၁၄၄၁ခန္းပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ဒီနန္းေတာ္ၾကီးဟာ က်ယ္၀န္းလွတဲ့ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ၾကီးအလယ္မွာ ခန္႕ညားထည္၀ါစြာရွိေနပါတယ္။ UNESCO အသိအမွတ္ျပဳ ဒီနန္းေတာ္၀င္းၾကီးထဲ လက္မွတ္၀ယ္ကာ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ နန္းေတာ္၀င္းထဲရွိ တိရစ ၦာန္ရံုကလည္း ၁၇၅၂ခုႏွစ္မွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာမို႕ ကမၻာ့သက္တမ္းအရင့္ဆံုး တိရစၦာန္ရံုျဖစ္ျပီး ယခုထက္တိုင္ဖြင့္လွစ္ထားဆဲျဖစ္လို႕ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ကမၻာ့သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ခ်ားရဟတ္လည္း ဗီယာနာျမိဳ႕မွာ ရွိပါေသးတယ္။ Vienna Giant Wheel လို႕ေခၚျပီး ယေန႔ထက္တိုင္ ေျပးဆြဲေနတုန္းပါ။ ဥေရာပရဲ႕ ဒုတိယအၾကီးဆံုး သခ်ၤ ိဳင္းကုန္းလည္းရွိျပီး ရုပ္အေလာင္းေပါင္း ၂.၅သန္း ျမွဳပ္ႏွံထားလို႕ ဗီယာနာျမိဳ႕လူဦးေရထက္ေတာင္ ပိုမ်ားေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။
ေနာက္ထူးျခားတာတစ္ခုက ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘာလင္ျမိဳ႕လိုပဲ ဗီယာနာျမိဳ႕ဟာလည္း ဒုတိယကမၻာစစ္ျပီးေနာက္ ၁၉၅၅ခုနွစ္အထိ ၄ပိုင္းပိုင္းခံရျပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ျပင္သစ္၊ ယူေက၊ ဆိုဗီယက္ယူနီွယံတို႕က တစ္ပိုင္းစီခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရတယ္လို႕သိရပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ ဗီယာနာဟာ တျဖည္းျဖည္ူၾကိဳးစားခဲ့ရာ ယခုဆိုရင္ ေရႊထီးျပန္ေဆာင္းေနျပီလို႕ေျပာလို႕ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏွစ္စဥ္စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ ဗီယာနာျမိဳ႕ဟာ ကမၻာ့ေနခ်င္စဖြယ္အေကာင္းဆံုးျမိဳ႕ ဘ၀အရည္အေသြးအျပည့္မီဆံုးျမိဳ႕အျဖစ္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ကစျပီး ၈ႏွစ္ဆက္တိုက္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရတာေၾကာင့္ပါ။
November 18, 2017 April 20, 2021 Posted in Europe, Heritage, Travel, UncategorizedTagged Europe, Experience, Nu Myat around the World, TravelLeaveacomment
ရောမအင်ပါယာကြီးထွန်းကားရာ အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့ကြီးက ဘုန်းမီးနေလတောက်ခဲ့တုန်းက ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံတွေနဲ့ ထူးခြားနေပါတယ်။ ရောမမြို့ထဲမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပါရှိနေတယ်ဆို ပိုပြီးထူးဆန်းမနေဘူးလား။ ဟုတ်ပါတယ်။ ရောမမြို့ထဲမှာ ကမ္ဘာ့အသေးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဗာတီကန်စီးတီး (Vatican City)နိုင်ငံ တည်ရှိလို့နေပါတယ်။ ဗာတီကန်နိုင်ငံဟာ ဘယ်လောက်များသေးလဲဆိုရင် အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် ၁၁၀ ဧကသာကျယ်ဝန်းပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့နဲ့ယှဉ်ရင်တောင် အဆပေါင်း ၁၃၀၀ကျော်သေးငယ်ပါတယ်။ ပန်းခြံကြီးတစ်ခု၊ အိမ်ရာစီမံကိန်းတစ်ခုစာလောက်ပဲကျယ်တာပါ။ ရောမမြို့နဲ့ ၂မိုင်ကျော် နယ်နိမိတ် ထိစပ်နေတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပြီး နယ်နိမိတ်အများစုကို တံတိုင်းတွေကာထားပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံးနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံက ရုရှား၊ ကနေဒါနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ဖြစ်ကြပြီး အသေးဆုံးနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံကတော့ ဗာတီကန်စီးတီး၊ မိုနာကိုနဲ့ သြစတြေးလျတိုက်နားရှိ Nauru ကျွန်းနိုင်ငံတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအသေးဆုံးနိုင်ငံ မိုနာကိုအကြောင်းကိုတော့ ပြည်မြန်မာဂျာနယ်မှာ ရေးသားဖော်ပြပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၂၉ခုနှစ်မှစတင်ကာ မြို့နိုင်ငံအဖြစ်စတင် သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီး မြို့နဲ့နိုင်ငံတစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့ City-State ဖြစ်တာကြောင့် စင်္ကာပူတို့ မိုနာကိုတို့လိုပဲ မြို့ဆိုပြီး သီးသန့်ရှိမနေပါဘူး။ ဗာတီကန်နိုင်ငံကို ၂၀၁၀ခုနှစ်က စာရေးသူရဲ့ ဥရောပခရီးစဉ်ထဲမှာ ရောမမြို့သို့သွားရင်း သွားရောက်လေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံက အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်သလို လူဦးရေလည်း အနည်းဆုံးနိုင်ငံပါ။ လူဦးရေပေါင်း ၁၀၀၀တောင်မပြည့်ပါဘူး။ လူမျိုးအများစုက အီတလီလူမျိုးတွေဖြစ်လို့ အိတလီဘာသာစကားကိုသာ ပြောကြပါတယ်။ ဗာတီကန်နိုင်ငံတွင်းမှာ ဆေးရုံမရှိလို့ နိုင်ငံတွင်းမွေးဖွားတဲ့သူမရှိပါ။ နိုင်ငံထဲ နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူတွေကိုသာ နိုင်ငံသားပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗာတီကန်ဟာ အီတလီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေပေမဲ့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားတွေကို အစောင့်တွေအဖြစ် ဌားရမ်းကာ တပ်ဖွဲ့ထားပါတယ်။ ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်ထားပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ အသက်၁၉နှစ်ကနေ ၃၀အတွင်း အရပ်၅ပေ၈လက်မခွဲထက်အမြင့်ရှိတဲ့ ဆွစ်ဇာလန်လူမျိုး လူပျိုလူလွတ်တွေကိုသာ ရွေးချယ်ခန့်ထားတာကြောင့် ဗာတီကန်နိုင်ငံရဲ့ တပ်ကသေးငယ်ပေမဲ့ အထင်သေးလို့မရပါဘူး။
ဗာတီကန်နိုင်ငံဟာ သေးငယ်ပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာတိုက်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ခေါင်းရှိပြီး ဗာတီကန်စာပို့စနစ်က အီတလီထက်တောင်ပိုကောင်းပိုမြန်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် ရေဒီယိုအသံလွင့်ဌာန ရှိကာ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားသို့ ဘာသာစကားပေါင်း၂၀ခုဖြင့် ထုတ်လွှင့်လျှက်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အလံ၊ နိုင်ငံတော်သီချင်း၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ငွေသားတို့လည်း ကိုယ်ပိုင်ရှိပါတယ်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းပုံပါရှိတဲ့ ၁ယူရိုတန်အကြွေစေ့ကို စုဆောင်းသူများတယ်လို့သိရပါတယ်။
အသေးဆုံးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဗာတီကန်မှာ အကြီးဆုံးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနက္ခတာရာကြည့်မှန်ပြောင်းကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဗာတီကန်စီးတီးနိုင်ငံတွင်းမှာ မဟုတ်ဘဲ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ အရီဇိုးနားပြည်နယ်ထဲ ထားရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း စိန့်ပီတာဘုရားကျောင်းကြီးလည်း နိုင်ငံတွင်းရှိလို့နေပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အတွက် အမွန်မြတ်ထားရာ ဘုရားကျောင်းကြီးဖြစ်ပြီး လက်ရာမြောက်လှတဲ့ အနုစိတ်ဗိသုကာလက်ရာများကြောင့်လည်း ကမ္ဘာမှာကျော်ကြားလှပါတယ်။ နဂိုရှိပြီးသား ဘုရားကျောင်းအုတ်မြစ်ကိုအခြေခံပြီး အသစ်တည်ဆောက်တာ နှစ်ပေါင်း ၁၂၀တိုင်ကြာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ပန်းရန်၊ ပန်းပု၊ ပန်းချီ၊ မှန်စီစတဲ့ အသေးစိတ်အလှဆင်တာ နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ကြာသွားပါတယ်တဲ့။ အခန်းပေါင်း ထောင်ကျော်ရှိပြီး အဆောက်အအုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နေတဲ့ ဗာတီကန်နန်းတော်ကြီးတွေလည်းရှိပါတယ်။နန်းတော်တွေရှိပေမဲ့ ဘုရင်တော့ မရှိပါဘူး။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလက်အောက် သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာ ၂၀၁၃ခုနှစ်ကတည်းက ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံခဲ့ရတဲ့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်အုပ်ချုပ်နေပါတယ်။
သေးငယ်လှတဲ့နိုင်ငံလေးမှာ ဝင်ငွေကတော့ ပြတိုက်ဝင်ကြေးနဲ့ တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းရာကနေ အဓိကရပါတယ်။ အီတလီလူမျိုးတွေအနေနဲ့ နှစ်စဉ်အခွန်ခရဲ့ ၈ရာခိုင်နှုန်းကို အစိုးရကိုမပေးဘဲ ဗာတီကန်ဆီ လှူချင်ပါက လှူခွင့်ပေးထားပါတယ်။ တစ်နှစ်ကို ဧည့်သည် ၅သန်းလောက်လာလို့ နိုင်ငံတွင်း အမြဲလူပြည့်နေတတ်တယ်။ ဘုရားကျောင်းထဲ၊ ပြတိုက်ထဲ ဝင်ကြည့်ချင်ပါက အကြာကြီးတန်းစီရပါတယ်။ ဗာတီကန်ပြတိုက်တွေ အနှံ့သာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် ၉မိုင်အရှည်ရှိလို့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို တစ်မိနစ်သာခံစားမယ်ဆိုရင်တောင် ပန်းချီကားအကုန်လုံးကို ခံစားကြည့်ရှုဖို့ လေးနှစ်လောက်အချိန်ယူရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဗာတီကန်စာကြည့်တိုက်နဲ့ Sistine Chapel ရှိ စတုရန်းပေပေါင်း ၆၀၀၀ကျော်ရှိ မိုင်ကယ်အန်ဂျလိုလက်ရာ မျက်နှာကျက်ပန်းချီကားကြီးကလည်း အနုစိတ်ကာ လက်ရာမြောက်လွန်းသဖြင့်ကျော်ကြားလှပါတယ်။ အနုပညာလက်ရာမြောက်တဲ့ အဆောက်အအုံတွေ၊ သမိုင်းအရ၊ ဘာသာရေးအရ အရေးပါတဲ့ နေရာနဲ့ အဆောက်အအုံတွေများစွာရှိလို့ UNESCO အသိအမှတ်ပြု သမိုင်းဝင်နေရာ အဖြစ် တစ်နိုင်ငံလုံး အသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့ တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံလည်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။
November 18, 2017 April 20, 2021 Posted in Europe, Natural Wonder, Travel, UncategorizedTagged Europe, Experience, Nature, Nu Myat around the World, TravelLeaveacomment
ရေပေါ်မြို့လေး၊ အချစ်မြို့တော်၊ မျက်နှာဖုံးမြို့တော် စသဖြင့် အမည်တွင်တဲ့ ဗင်းနစ်မြို့လေးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလှဆုံးမြို့တွေထဲက တစ်မြို့ပါ။ တူးမြောင်းတွေ၊ တံတားတွေ အဆောက်အအုံတွေနဲ့ မြို့လေးရဲ့ နေရာတိုင်းဟာ လေဟာပြင်ပြတိုက်လို ကြည့်လို့မကုန်နိုင်လောက်အောင်လှပါတယ်။ ရေပေါ် Venice မြို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်တွေက အများကြီးပဲ… သိသလောက်ပြောပြမယ်လေနော်…
ဥရောပတိုက်တောင်ဘက်ရှိ အီတလီနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ ဗင်းနစ်မြို့က ရေပေါ်မြို့ဆိုပေမဲ့ ကမ်းခြေမြို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ ပင်လယ်နဲ့ နီးပေမဲ့ ပင်လယ်ထဲမှာ ရှိတာလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ပင်လယ်ထုံးအိုင်လို့ခေါ်ရမယ့် ပင်လယ်နဲ့ဆက်နေတဲ့ ရေပြာအိုင်ကြီးထဲမှာ ရှိနေတာပါ။ သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကျွန်းတန်းတွေက ပင်လယ်ကို ခြားထားပေးလို့ အိုင်လိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထဲမှာ ရှိနေတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း မြို့ထဲတူးမြောင်းတွေထဲ စီးဆင်းနေတဲ့ ရေတွေက ကြည်လင်လှတဲ့ စိမ်းပြာရောင် ပင်လယ်ရေတွေ ဖြစ်နေတာပါ။ ဒီရေစိမ်းစိမ်းလေးတွေကြောင့်လည်း မြို့အလှ ပိုတိုးနေတာပေါ့။
ရေပေါ်မြို့ဆိုတဲ့အတိုင်း မြို့လေးဟာ လူလုပ်ကျွန်းပေါင်း ၁၁၈ကျွန်းပေါ်တည်ထားတာဖြစ်ပြီး ကျွန်းတွေကို ဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ တံတားပေါင်း ၄၀၀ကျော်ရှိပါတယ်။ မြို့လေးမှာ ကားလမ်း ရထားလမ်းဘာဆိုဘာမှ မရှိပါဘူး။ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ သွားချင်ရင် လမ်းလျှောက်ရင်လျှောက်၊ မလျှောက်ရင် ရေလမ်းကနေသွားမှ ရမှာပါ။ ကျွန်းတွေကြားမှာရှိတဲ့ တူးမြောင်းတွေကနေ လှေတွေ၊ စက်လှေတွေ၊ သင်္ဘောတွေနဲ့ သွားကြရပါတယ်။ တက္ကစီတွေ၊ ဘတ်စ်ကားတွေ၊ အရေးပေါ်ယာဉ်တွေကအစ ရေပေါ်ရှပ်ပြေးယာဉ်တွေပါ။ ဗင်းနစ်မြို့ကို သွားချင်ရင် ကုန်းပေါ်ရှိမြို့ဘက်နဲ့ ကျွန်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ ရထားလမ်းရှိတော့ ရထားနဲ့ သွားလို့ရပါတယ်။ ကုန်ပေါ်ရှိမြို့ဘက်အခြမ်းမှာတော့ မာကိုပိုလိုလေဆိပ်ရှိပါတယ်။ နုမြတ်တို့သွားတုန်းကတော့နှစ်ခေါက်လုံး ရထားနဲ့သွားခဲ့တာပါ။ ပထမတစ်ခေါက်က ရောမမြို့ကနေ သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒုတိယတစ်ခေါက်ကကျတော့ အီတလီမြို့တော် မီလန်ကနေသွားခဲ့တာပါ။
အကျယ်အဝန်းစုစုပေါင်း ၁၆၀စတုရန်းမိုင်သာရှိတဲ့ ဗင်းနစ်မြို့ဟာ အခုချိန်မှာ အရမ်းကို ကဗျာဆန်တဲ့မြို့၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ အများအပြားလာရောက်တဲ့မြို့၊ လူကုံထံတွေ လာရောက်အပန်းဖြေတဲ့ မြို့ဖြစ်ပေမဲ့ မြို့စတည်ခဲ့တုန်းကတော့ ရည်ရွယ်ချက်ကတစ်မျိုးပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၅၀၀ကျော်က ရောမအင်ပါယာအရေးနိမ့်လာတဲ့အခါ အီတလီလူမျိုးတစ်စုဟာ ရန်သူလက်ပုန်းကွယ်တဲ့အနေနဲ့ လူသူအရောက်အပေါက်နည်းတဲ့ ဒီဗင်းနစ်မြို့ဖြစ်လာမယ့်ကျွန်းပေါ်ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ကြတာပါ။ ရေထဲမှာရှိတော့ တော်ရုံလာတိုက်ခိုက်လို့လည်း မရနိုင်ဘူးဆိုပြီး အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထူးဆန်းတယ်နော်။ အကြောက်တရားတွေနဲ့တည်ခဲ့တဲ့ မြို့က အခုအခါမှာတော့ အလှတရားတွေ ပေါင်းဆုံနေရာ ဖြစ်လို့နေတာ။
နောက်ထပ်ထူးဆန်းတာတစ်ခုက ဗင်းနစ်မြို့ဟာ ကျွန်းပေါ်ဒီအတိုင်းအိမ်ဆောက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သန်းချီတဲ့ သစ်လုံးတွေပေါ်မှာ မြို့တည်ထားတာပါတဲ့။ တကယ်ကို အံ့သြဖို့ကောင်းပါတယ်။ မူလကျွန်းပေါ်မှာ သစ်လုံးတွေကို စေ့နေအောင် ဒေါင်လိုက်စိုက်ထားပြီး အပေါ်ကနေရွှံ့လောင်းကာ မြို့ကွက်ဖော်ပြီး အိမ်တွေဆောက်ခဲ့တာတဲ့လေ။ ရေပေါ်မြို့ဆိုတော့ ရေလမ်းအသုံးပြုရအောင် တူးမြောင်းတွေပါ မြို့ဖော်တဲ့အခါ ထည့်ဖော်ထားခဲ့တာတဲ့။ ရန်သူတွေလာတိုက်ရင် မျက်စိလည်အောင်လည်း လမ်းတွေကို ရှုပ်ရှက်ခတ်အောင် ဖောက်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗင်းနစ်မြို့မှာ လိပ်စာရှာရသိပ်ခက်ပါသတဲ့။ ကုန်းပေါ်ကလမ်းတွေကလည်း ကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေပါ။ လူနဲ့မြင်းလှည်းတွေ သွားလို့ရလောက်တဲ့ အထိပဲ ကျယ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကျဉ်းဆုံးလမ်းတောင် အဲ့မှာ ရှိပါတယ်။ Calleta လို့ခေါ်ပြီး ၅၃စင်တီမီတာသာကျယ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ တစ်နှစ်ကို ၁၅သန်းကျော်လာပေမဲ့ မြို့နေလူဦးရေကတော့ နှစ်ပေါင်း ၅၀အတွင်း ၁သိန်း၂သောင်းကနေ ၆သောင်းအထိလျော့ကျလာပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့်လည်း ၂၀၃၀ခုနှစ်လောက်ကျရင်တော့ ဒေသခံတွေမရှိသလောက်နည်းသွားပြီး ခရီးသည်တွေနဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေပဲရှိတဲ့ တစ္ဆေမြို့ဖြစ်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ ဒေသခံတွေ ဗင်းနစ်မြို့ကိုစွန့်ခွါရတဲ့ အကြောင်းတွေကတော့ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံတွေ ထိန်းသိမ်းရာမှာ အကုန်အကျများခြင်း၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ အလွန်များခြင်းအပြင် မြို့ရေလျှံခြင်းကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ တစ်နှစ်ကို ၄ကြိမ်ပင်လယ်ရေမြင့်တက်လေ့ရှိပြီး အဲဒီအချိန်ကျရင် တစ်မြို့လုံးနီးပါးရေလျှံတက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗင်းနစ်မြို့လေးဟာ တစ်နှစ်ကို ၂မီလီမီတာရေအောက်ထဲ နိမ့်ဝင်နေပါသတဲ့။ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုတွေသာ မလုပ်ဘူးဆိုလျှင်ဖြင့် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါ ဗင်းနစ်မြို့လေး ရေအောက်ရောက်သွားမယ့်ကိန်းပါ။ ယခုအခါမှာ ရေလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်မခံရအောင် ကြံဆလုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်လို့ ဗင်းနစ်မြို့ရဲ့ အနာဂတ်လေး သာယာလှပပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။
Venice မြို့ရဲ့ လမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေကြားထဲ တစ်လမ်းဝင်တစ်လမ်းထွက်။ တံတားတစ်စီးပြီး တစ်စီးဖြတ်ရတာ ရသတစ်မျိုးပါပဲ။ လမ်းလေးတွေက ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတော့ မှန်းဆလို့မရပါဘူး။ လမ်းပျောက်သွားရင်ပိုတောင်ကောင်းပါသေးတယ်။ တော်ရုံလူတွေ မမြင်ရတဲ့ မြို့အလှတွေ မြင်ရတာပေါ့နော်။ အဆောက်အအုံတိုင်းက သူ့ဟာသူလှနေတာဆိုတော့ အကုန်လုံးက ကြည့်ချင်စရာပါ။ နုမြတ်တို့တုန်းက မြို့အဝင်ဘူတာရုံကနေ မြို့လည် စိန့်မာကိုရင်ပြင်ဆီ လမ်းလျှောက်သွားတာ အရမ်းသဘောကျတာပဲ။ လမ်းတလျှောက် ဆိုင်လေးတွေက ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေ ဝင်ငမ်းလိုက်၊ ရိုးရာမုန့်တွေ ဝယ်စားလိုက်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်နဲ့ နာရီဝက်လောက်ပဲ သွားရမယ့်အကွာအဝေးက ၃နာရီလောက်ကြာသွားတယ်လေ…
ဗင်းနစ်မြို့ရဲ့ သင်္ကေတကိုပြောပါဆိုရင် မျက်နှာဖုံးတွေအပြင် Gandola လို့ခေါ်တဲ့ လူလှော်လှေလည်းပါပါတယ်။ သစ်အမျိုးအစား၈မျိုးနဲ့ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ လှေကြီးရဲ့ ပုံသဏ္ဏာန်က ဗင်းနစ်မြို့ကို ကိုယ်စားပြုထားပြီး မြို့အနှံ့တူးမြောင်းတလျှောက် ချောင်ကြိုချောင်ကြားနေရာတွေပါ လှော်ခတ်ပေးလို့ ဗင်းနစ်ရောက်သူတိုင်း မဖြစ်မနေစီးလေ့ရှိကြပါတယ်။
ဂန်ဒိုလာလှေတွေက ဗင်းနစ်မှာပဲရှိတဲ့လှေတွေပါ။ ဗင်းနစ်မှာတောင် အစီး ၃၀၀ကျော်ပဲရှိသတဲ့လေ။ Gandola လှေမောင်းသူတွေဟာလည်း လိုင်စင်ရှိမှမောင်းလို့ရတာပါ။ လှေမောင်းသူပေါင်းကလည်း ၄၀၀လောက်ပဲရှိပါသတဲ့။ လှေမောင်းသူတွေက အဖြူအပြာကန့်လန့်စင်းတီရှပ်ပေါ် ဖဲပြားအနီလေးတတ်ထားတာ။ ဗင်းနစ်မြို့ရဲ့တူးမြောင်းတွေအကြား တစ်လမ်းဝင်တစ်လမ်းထွက်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြို့စားကြီးတိုင်းခန်းလှည့်လည်နေသလိုတောင်ထင်ရမှာ။ တစ်ခါတလေ လှေပေါ်မှာ အီတလီ အော်ပရာသီချင်းကြီးတွေတောင်ဆိုပြသေးတယ်။ စုံတွဲလေးတွေ စီးရင် so romantic ပေါ့။ တံတားအောက်ကဖြတ်သွားတိုင်း Kiss ပေးရင် အချစ်ရေးကံကောင်းတယ်ဆိုပဲ။
Gandolaက တစ်စီးကို ယူရို ၈၀ပေးရတယ်။ ၆ယောက်ထိစီးလို့ရတယ်။ ၁ယောက်ပဲရှိရှိ ၆ယောက်ပဲရှိရှိ ၈၀ပါ။ မိနစ်၄၀ကြာ မောင်းပို့ပေးတယ်။
ဗင်းနစ်မြို့ရဲ့ တူးမြောင်းပေါင်း၁၇၇ခုထဲ တော်ဝင်တူးမြောင်းကြီးက အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး မြို့ကို နှစ်ခြမ်းခွဲထားပါတယ်။ Sပုံသဏ္ဏာန်ရှိတဲ့ တူးမြောင်းကြီးထဲ ဘတ်စ်သင်္ဘောတွေ၊ ရေပေါ်taxi တွေ ပြေးဆွဲနေတာအများကြီးပဲတွေ့ခဲ့ရတယ်။ တူးမြောင်းတစ်ဖက်တစ်ခြမ်းမှာလည်း သင်္ဘောဆိပ်တွေ ခပ်စိပ်စိပ်ရှိလို့ သွားရအဆင်ပြေပါတယ်။ တိုးရစ်တွေအနေနဲ့ တစ်နေ့တာ လက်မှတ်ဝယ်ထားပြီး ကိုယ်ဆင်းချင်တဲ့နေရာမှာ ဆင်းလိုက်တက်လိုက်နဲ့ လျှောက်လည်လို့ရတယ်။ တစ်နေ့တာလက်မှတ်က တစ်ယောက်ကို ယူရို ၂၀ပါ။ တစ်ကြောင်းပဲ စီးမယ်ဆိုရင်တော့ ယူရို ၇.၅ကျပါမယ်။
Rialto တံတားပေါ်က ရှုခင်းကြည့်မယ်
ကျွန်းပေါင်း ၁၁၇ကျွန်းရှိတဲ့ Venice မြို့မှာ တံတားပေါင်း ၄၀၀ကျော်ရှိပါတယ်။ မဟာတူးမြောင်းကြီးကိုဖြတ်တဲ့ အဓိကတံတားကြီး ၄စင်းရှိပြီး Rialto ဆိုတဲ့ တံတားကြီးကတော့ နာမည်အကြီးဆုံးပါ။ မြို့ရဲ့ စည်ကားတဲ့နေရာမှာရှိသလို တံတားပေါ်က မြင်ရတဲ့ ရှုခင်းကလည်း အလွန်လှပါတယ်။ ထူးဆန်းတာက တံတားပေါ်မှာ ဆိုင်ခန်းတွေလည်းရှိနေတာပါ။ အဲ့ဆိုင်တွေမှာတော့ မဝယ်နဲ့ပေါ့။ တခြားထက်ဈေးပိုကြီးလို့။
ဗင်းနစ်ရောက်ရင် မသွားမဖြစ်ကတော့ မြို့စတည်တဲ့နေရာရှိ စိန့်မာကိုရင်ပြင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခန့်ညားထည်ဝါလှတဲ့ အဆောက်အအုံတွေ ဝန်းရံထားတဲ့ ရင်ပြင်ကျယ်ကြီးက တကယ်ကို ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာပါ။ စိန့်မက်ခ်နာရီစင်၊ Doge’s Palace ဒေါဂျီနန်းတော်ကြီးနဲ့ စိန့်မက်ခ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးရဲ့ ဗိသုကာလက်ရာတွေကလည်း အံ့မခန်းဖွယ်ရာပါ။ ရင်ပြင်ကျယ်တော့ ခိုလေးတွေလည်းအများကြီးပဲ။ ခိုလေးတွေ အစာက တစ်ထုပ်ကို ၁ယူရိုနဲ့ရောင်းနေကြတယ်။ စိန့်မက်ခ်ဘုရားကျောင်းကြီးနောက်ခံထားပြီး ခိုစာကျွေးနေတဲ့ ပုံက Venice မှာ Tourist တွေရိုက်လေ့ရှိကြတဲ့ပုံပါ။ ရင်ပြင်ကြီးကနေ မြင်ရတဲ့ Gandola လှေလေးတွေ အစီအရီစိုက်ထားတဲ့ ကမ်းစပ်မြင်ကွင်းကလည်း နာမည်ကျော်ပါတယ်။ နေဝင်ချိန်ရှုခင်းကလည်း တအားလှဆိုပဲ။
စိန့မာကို ရင်ပြင်အလယ်က ခေါင်းလောင်းမျှော်စင်ကြီးက ဗင်းနစ်မြို့မှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်လို့ မျှော်စင်ပေါ်ကနေ တစ်မြို့လုံးကို လှမ်းမြင်ရပါတယ်။ နုမြတ်တို့သွားတုန်းက တက်ကြည့်ခဲ့သေးတယ်။ တစ်ယောက်ကို ၈ယူရိုပေးရတယ်။ တစ်မြို့လုံးကို အပေါ်စီးကနေမြင်ရတာဆိုတော့တန်ပါတယ်။
မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ ဒီကျွန်းလေးက အိမ်လေးတွေရောင်စုံနဲ့ ချစ်စရာလေးပါ။ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ အရမ်ကောင်းမှာပါ။ အဲ့ကျွန်းကိုသက်သက်သွားတဲ့ half day tour တွေတောင်ရှိပါတယ်။ public transport နဲ့လည်း သွားလို့ရတယ်။ နုမြတ်တို့တော့ မရောက်ခဲ့လိုက်ရဘူး။
ပင်လယ်နားကမြို့ဆိုတော့ ပင်လယ်စာတွေပေါတဲ့ Venice ရောက်ရင် စားကြည့်သင့်တဲ့ အစားအစာကတော့ စပါကတီခေါက်ဆွဲ မဲမဲလေးပါ။ မှင်ရည်ခေါက်ဆွဲလို့ခေါ်ရမယ် ထင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို Squid ink Spaghetti အီတလီလို Spaghetti al nero de Sepia လို့ခေါ်ပါတယ်။ ပြည်ကြီးငါးကထွက်တဲ့ သဘာဝမှင်ရည်နဲ့ ချက်ထားလို့ အရသာဆန်းပါတယ်။ အီတလီ gelato ရေခဲမုန့်တွေလည်း အရမ်းအရသာရှိလို့ စားကြည့်ကြပါ။
Venice ကို မျက်နှာဖုံးမြို့တော်လို့ခေါ်ပါတယ်။ မြို့ထဲ ဘယ်ဆိုင်ကြည့်ကြည့် အမျိုးစုံတန်ဆာဆင်ထားတဲ့ မျက်နှာဖုံးလေးတွေ တွေ့ကြရမှာပါ။ Venice မှာလုပ်တဲ့ မျက်နှာဖုံးပွဲတော်က အရမ်းနာမည်ကြီးတာပဲတဲ့။ နှစ်စဉ် အီစတာပွဲတော်မကျင်းပမီ ရက်၄၀အလိုမှာ ပြုလုပ်တာဆိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာသွားရမှာပေါ့။ ပွဲတော် မသွားနိုင်ရင်တောင် မျက်နှာဖုံးတစ်ခုလောက် အိမ်မှာအလှထားဖို့ အမှတ်တရဝယ်သွားပါလေ။
ဒါတွေကတော့သင်္ကြန်တွင်းသွားခဲ့တုန်းကပေါ်မူတည်ပြီး နုမြတ်သိသလောက်ရယ် နုမြတ်စိတ်ဝင်စားတာတွေရယ်ကို ပြန်မျှဝေတာပါ။ တခြားအချက်တွေလည်း ရှိဦးမှာပါ။ သိခဲ့ရင်လည်း ပြောပြပေးပါဦးနော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်္ကြန်တွင်းသွားခဲ့တဲ့ ဥရောပ၈နိုင်ငံခရီးစဉ်ထဲက တခြားစိတ်ဝင်စားစရာတွေလည်း ရေးပေးဦးမှာဖြစ်လို့ Like နဲ့ See First လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်နော်။
March 14, 2017 April 20, 2021 Posted in Adventure, Africa, Heritage, Natural Wonder, Travel, UncategorizedTagged Africa, Experience, Nature, Nu Myat around the World, TravelLeaveacomment
အီဂျစ်အသက်သွေးကြော ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး နိုင်းမြစ်ပေါ်ဖြတ်ကာ.. 🚢
🌍World’s Longest River
ဧရာဝတီမြစ်ကြီးက ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသက်သွေးကြောမြစ်ဖြစ်သလို နိုင်းမြစ်ကလည်း အီဂျစ်တို့ရဲ့ အသက်သွေးကြောမြစ်ပါ။ နိုင်းမြစ်က ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှည်ဆုံးမြစ်ဖြစ်ပြီး မိုင်ပေါင်း ၄၁၆၀မိုင်အထိ ရှည်လျားပါတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်က မိုင်ပေါင်း ၁၃၅၀ရှည်တော့ ဧရာဝတီထက် သုံးဆကျော်ပိုရှည်လျားတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဧရာဝတီမြစ်က ကျွန်မတို့မြန်မာတစ်နိုင်ငံထဲမှာပဲ တည်ရှိတဲ့ တစ်နိုင်ငံထဲပိုင် အမိမြစ်ကြီးပါ။ နိုင်းမြစ်ကတော့ အီဂျစ်တစ်နိုင်ငံလုံးကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေပေမဲ့ မြစ်ရဲ့ ၂၂ရာခိုင်နှုန်းသာ အီဂျစ်မှာတည်ရှိနေတာပါ။ နိုင်းမြစ်ဖြတ်သန်းစီးဆင်းတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၀နိုင်ငံတောင်ရှိတာတဲ့။ တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ဘရူရွန်ဒီနိုင်ငံကနေ မြစ်ဖျားခံလာတဲ့ နိုင်းမြစ်ဖြူနဲ့ အီသိယိုးပီးယားနိုင်ငံကနေ မြစ်ဖျားခံလာတဲ့ နိုင်းမြစ်ပြာ ၂စင်းဟာ ဆူဒန်နိုင်ငံအရောက်မှာ နိုင်းမြစ်ကြီးအဖြစ် ပေါင်းဆုံစီးဆင်းပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ အီဂျစ်နိုင်ငံကနေဖြတ်ပြီး မြေထဲပင်လယ်ထဲသို့ စီးဝင်သွားတာပါတဲ့။
⬆South to North
နောက်ထူးခြားတာတစ်ခုက နိုင်းမြစ်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ မြစ်အများစုလိုမျိုး မြောက်မှတောင်စီးဆင်းတာမဟုတ်ဘဲ တောင်တန်းများရှိရာ တောင်မှမြောက်ကို စီးဆင်းလို့ မြစ်ဖျားပိုင်းရှိရှာ တောင်ပိုင်းကို အီဂျစ်အထက်ပြည်၊ မြစ်အောက်ပိုင်းရှိရာ မြောက်ပိုင်းကို အီဂျစ်အောက်ပြည်လို့ သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ထားကြတာပါတဲ့။
နောက်ပြီး နိုင်းမြစ်က အီဂျစ်နိုင်ငံ သမိုင်းတလျှောက် တကယ်ကို အရေးပါခဲ့တာ။ နိုင်းမြစ်ကိုမှီပြီး အီဂျစ်ပြည်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်လည်း မမှားဘူး။ အီဂျစ် နိုင်းမြစ်ကမ်းဘေးတလျှောက် နိုင်းမြစ်ရေလျှံပြီးနောက် ကျန်ခဲ့တဲ့နုန်းမြေတွေက အရမ်းစိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းတာတဲ့လေ။ နိုင်းမြစ်ကိုမှီပြီး ရှေးခေတ်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် အင်ပါယာကြီးမားခဲ့တဲ့ အီဂျစ်ပြည်နဲ့ အီဂျစ်ယဉ်ကျေးမှုကြီးပေါ်ထွန်းခဲ့တာပါ။ နုန်းမြေတွေရှိတဲ့ မြစ်ဝှမ်းဒေသတွေကို အနက်ရောင်မြေလို့ခေါ်ကြပြီး မြစ်ကမ်းနဲ့ဝေးတဲ့ သဲကန္တာရတွေကိုတော့ အနီရောင်မြေဟုခေါ်ပါသတဲ့။ အီဂျစ်ဆိုတဲ့အမည်က အနက်ရောင်မြေလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတာဆိုတော့ကာ ဒီဟာကိုအစွဲပြုပြီး မှည့်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်မှာပါ။
နိုင်းမြစ်က အီဂျစ်ပြည်ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဏမှာသာ အရေးပါရုံတင်မက မျက်မှောက်ခရီးသွားခေတ်မှာ ခရီးသွားကဏ္ဏမှာလည်း အလွန်အရေးပါနေတာကို ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူးကာလတုန်းက Tour Diamond ခရီးစဉ်နဲ့ အီဂျစ်နိုင်ငံကို ၇ညအိပ်၈ရက် သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တုန်းက အဲဒီ့နိုင်းမြစ်တလျှောက် အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ် ၃ညတာအနားယူအိပ်စက်ပြီး အီဂျစ်နိုင်ငံ ရှေးဟောင်းမြို့တော်တွေဆီကို တစ်မြို့ဝင်တစ်မြို့ထွက် ကမ်းကပ်ကာ သွားရောက်လည်ပတ်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ပါ။ အရင်ဆုံးမြို့တော်ကိုင်ရိုကနေ သင်္ဘောတွေဆိုက်ကပ်ရာ အာစွမ်န်(Aswan)မြို့ဆီကို ညအိပ်ရထားနဲ့ သွားရောက်ပြီး အဲ့ကနေတဆင့် ခရီးစဉ်အဆုံးဖြစ်တဲ့ လပ်ဆွာ(Luxor) မြို့ဆီကို တောင်ကနေမြောက် နိုင်းမြစ်တလျှောက် ၄ရက်တာ စုံဆင်းခဲ့တာပါ။
ဒီသင်္ဘောခရီးစဉ်တလျှောက်မှာ အီဂျစ်တစ်နိုင်ငံလုံးအသုံးပြုတဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို ထုတ်လုပ်နေပြီး ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရေကာတာတွေထဲ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ အာစွမ်န်ရေကာတာကို ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီရေကာတာဆောက်လုပ်လို့ နိုင်းမြစ်မှာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလူတို့ပြုလုပ်တဲ့ရေကန်ဖြစ်တဲ့ နာဆာရေကန် ကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။
🏛Attractions along Nile River
-နာဆာရေကန်ကို မျက်နှာမူပြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဖီလေး(Philae)ဘုရားကျောင်း၊
-နာဆာကန်စပ်မှာရှိပြီး အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ အလွန်ကျော်ကြားလှတဲ့ အဘူဆင်ဘဲလ်(Abu Simbel)ဘုရားကျောင်း၊
(ဒီဘုရားကျောင်း ၂ခုရဲ့ မူလနေရာတွေက နာဆာရေကန်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက် ရေဖုံးလွှမ်းသွားလို့ ရေ လွတ်ရာကို ရှေးလက်ရာမပျက်ပြောင်းခဲ့ရတာတဲ့။ အဲဒီ ဘုရားကျောင်းတွေ အကြောင်း နောက်မှ Post သက်သက် ရေးတင်ပေးမယ်)
-ကိုမိုဘို(Komobo)မြို့မှာဆိုရင် ရှေးခေတ်ပုရိသတွေကြား ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ကလီယိုပါထရာဘုရင်မ တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ရှေးခေတ်က ဆေးရုံအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ကိုမိုဘိုဘုရားကျောင်း
(အဲ့ခေတ်က အသုံးပြုတဲ့ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းတွေ ရယ်၊ ကလီယိုပက်ထရာ ဘုရင်မပုံရယ် နံရံမှာထွင်းထားတာကိုတွေ့နိုင်တယ်။ မိကျောင်းကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရားကျောင်းမို့လို့ မိကျောင်းမာမီတွေလည်း အများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်)
-အက်ဒ်ဖူမြို့မှာ အာဖရိကရိုးရာမြင်းလှည်းတွေကို အသုံးပြုသွားရောက်ရတဲ့ အက်ဒ်ဖူ(Edfu)ဘုရားကျောင်း
(အဲ့မှာ Gods of Egypt ရုပ်ရှင်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ နံရံမှာ ထွင်းထုထားသလို၊ နှစ်ပေါင်းထောင်ချီတိုင်အောင် အနံ့မပြယ်သေးတဲ့ ရေမွှေးထုတ်တဲ့ အခန်းရှိတယ်)
-လပ်ဆွာ(Luxor)မြို့မှာ နိုင်းမြစ်အရှေ့ဘက်နဲ့ အနောက်ဘက်ကမ်းတွေမှာရှိတဲ့ ထူးခြားခံ့ညားသော ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံတွေဆီကို သွားရောက်လည်ပတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
(လပ်ဆွာမြို့မှာ တူတန်ခမမ်ဘုရင် နဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက်ဖာရိုဘုရင်တွေရဲ့ မာမီရုပ်အလောင်းတွေ မြှုပ်ထားရာ Valley of Kings အပါအဝင်တခြား ထူးဆန်းတဲ့နေရာတွေရောက်ခဲ့ပြီး မြို့အပေါ်စီးကနေမြင်ရတဲ့ မီးပုံးပျံလည်း စီးခဲ့လို့ အဲ့မြို့အကြောင်းကိုလည်း ဆောင်းပါး သပ်သပ်ခွဲရေးပေးပါဦးမယ်။ )
သင်္ဘောခရီးစဉ်တလျှောက်မှာ နိုင်းမြစ်ရဲ့ ရေအနက်မညီမျှမှုကိုချိန်ညှိတဲ့ ရေတံခါးတွေကိုလည်း ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါသေးတယ်။ ဒီရေတံခါးတွေရဲ့ ရေပြင်ချိန်ညှိမှုက စိတ်ဝင်စားစရာ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ရေဂါလံတန်ပေါင်းများစွာကို ထိန်းညှိပြီး သင်္ဘောတွေကို ဖြတ်သန်းသွားစေတဲ့အပြင် နှစ်စဉ်ရေကြီးမှုကိုပါထိန်းညှိပေးပါသတဲ့။
⛵Feluuca Local Yatch
နိုင်းမြစ်မှာ အပျော်စီးသင်္ဘောတွေအပြင် ဒေသခံတို့ရဲ့ရွက်လှေ FELUUCA စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။ ကျွန်မတို့စီးတဲ့ အချိန်က လေမတိုက်လို့ ရွက်လွှင့်လို့မရဘဲ ရှေ့က စက်လှေတစ်စီးကနေဆွဲပေးရတာကြောင့် ရွက်လှေမဟုတ်ဘဲ ဆွဲလှေဖြစ်ခဲ့ရတာလည်း ရယ်စရာပါ။ လှေပေါ်ကနေ မြစ်ရေကို ကိုင်ကြည့်ရာမှာ အေးစိမ့်နေတာပဲလေ။ နေ့လည်ခင်းကြီး နေပူထဲတောင် အေးစိမ့်နေတော့ ညဘက်ဆို မတွေးရဲဘူး။ စက်လှေနဲ့ နေဝင်ချိန် အလှကိုခံစားခဲ့သေးတယ်။ နေဝင်ချိန်ကတော့ တကယ်ကိုလှတာပါ။ ပုစွန်ဆီရောင် တောက်နေတဲ့ ကောင်းကင်နောက်ခံနဲ့ နိုင်းမြစ်ကြီးက တကယ့်ပန်းချီကားလိုပဲ။ မြစ်ကိုဖြတ်သန်းလာတဲ့ လေတွေကလည်း အရမ်းကို Fresh ဖြစ်တာ။ အဲ့အချိန်ကာလတွေ နောက်ပြန်ရွေ့ပြီး ရှေးခေတ်ရောက်သွားသလိုလို သဘာဝနဲ့ တစ်သားတည်းကျနေတာ…
အဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ နိုင်းမြစ်အတွင်း အပျော်စီးသင်္ဘောတွေကို ရက်တိုရက်ရှည်၊ သင်္ဘောအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်လို့ အီဂျစ်နိုင်ငံရောက်ခဲ့ရင် နိုင်းမြစ်တွင်း အပျော်စီးသင်္ဘောတွေကို မဖြစ်မနေစီးသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှုလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခြားပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးစဉ်တွေကို ဖော်ပြပေးနေလို့ Nu Myat around the World page ကို Like လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ ရှိကြပါစေ
January 20, 2017 April 20, 2021 Posted in Asia, Thailand, UncategorizedTagged Asia, bangkok, Cakes, food, Nu Myat around the World, Thailand, Unicorn CafeLeaveacomment
Unicorn နတ်မြင်းပျံရုပ်လေးတွေ ချစ်တဲ့သူတွေ တကယ်ကို အကြိုက်တွေ့မယ့် ကော်ဖီဆိုင်လေးပါ။ ဆိုင်ထဲမှာ ချစ်စဖွယ်အရောင်နုလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတာ ချစ်စရာလေး။ မျက်နှာကျက်ရော ကြမ်းပြင်ပါမကျန် လှနေရော…
ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့ Unicorn အရုပ်လေးတွေလည်း ဆိုင်ထဲအပြည့်ထည့်ပေးထားတာ။
ဒါတင်ဘယ်ကမလဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါ Unicorn ဖြစ်ခွင့်လည်း ရှိသေးတယ်ရော… Unicorn ဝတ်စုံလေးတွေ စိတ်ကြိုက်ဝတ်ခွင့်ပါပေးထားလို့လေ။
အစားအသောက်လေးတွေကလည်း တကယ် ချစ်စရာလေးတွေပါ။ သက်တန့်ကိတ်လေးတွေ၊ ကြယ်တာရာအအေးတွေ၊ ရောင်စုံခေါက်ဆွဲတွေနဲ့ စားချင်စဖွယ်ပါ။ ရောက်တဲ့သူတိုင်းလိုလို မှာတာကတော့ ပန်းနုရောင်၊ ခရမ်းနုရောင်နဲ့ မိုးပြာရောင် ၃ရောင်ရောနေတဲ့ Galaxy Star Milk Shake လေးပါ။ မြန်မာငွေနဲ့ ၅ထောင်ကျော်ပေမဲ့ ခွက်ကတော်တော်ကြီးပါတယ်။ ၃ယောက်လောက်သောက်မှ ကုန်မှာပါ။
ဆိုင်လေးက ခပ်သေးသေးပဲဆိုတော့ လူကျရင် နေရာရဖို့ ခဏစောင့်ရပါလိမ့်မယ်။ အစားအသောက်တွေဆိုလည်း ရဖို့စောင့်ရတာ တမေ့တမော။ ဒါပေမဲ့လည်း စောင့်နေတုန်း ဆိုင်ထဲ ဓာတ်ပုံတွေပတ်ရိုက်လို့ရတော့ အချိန်ကုန်လို့ကုန်မှန်းမသိတော့ဘူးလေ။
ဘန်ကောက်ရောက်လို့ အချိန်ရရင် Unicorn တွေလည်းချစ်ရင် သွားကြည့်သင့်ပါတယ်။
မြို့ထဲ Prarunam ကနေလာရင် ၁၅မိနစ်လောက်ပဲ သွားရတယ်။ BTS နဲ့သွားမယ်ဆို Chong Nonsi Station နားမှာရှိပါတယ်။
အခြားပုံတွေနှင့် ခရီးသွားဆောင်းပါးများကို ဒီ Facebook page ထဲ Like and Follow လုပ်ထားပြီး ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်
See more photos and travel articles in this facebook page. Thanks.
July 16, 2016 April 21, 2021 Posted in Asia, Malaysia, Street Photography, Travel, UncategorizedTagged Asia, George Town, Malaysia, Nu Myat around the World, Penang, Street Arts, TravelLeaveacomment
George Town မြို့
June 27, 2016 October 23, 2020 Posted in Europe, Netherlands, Travel, UncategorizedTagged Europe, Nature, Netherlands, Nu Myat around the World, TravelLeaveacomment
ဥရောပအနောက်မြောက်ရှိ နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် လေရဟတ်များ၊ တူး မြောင်းများကြောင့် သာမက မျက်စိတစ်ဆုံးမြင်ရသော ကျူးလစ်ရောင်စုံပန်းခင်းများ ကြောင့်လည်း ကမ္ဘာကျော်ကြားနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပန်းနိုင်ငံဟု တင်စားရလောက် အောင် ပန်းခင်းအများအပြားစိုက်ပျိုးထားပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ပန်းဥပေါင်း၏ ၆၂ရာခိုင် နှုန်းက နယ်သာလန်မှာ ရှိသည်ဟုလည်း သိရသည်။ ထိုအပင်များအနက် ကျူးလစ် ပင်များမှာ အများဆုံးဖြစ်ကာ စီးပွားဖြစ်အထိ စိုက်ပျိုးကြပြီး နိုင်ငံတကာသို့ ပန်းဥတင်ပို့မှုနှုန်းမှာ တစ်နှစ်လျှင် ၉သန်းကျော်ရှိကြောင်း တစ်နိုင်ငံလုံး၏ ကျူးလစ်ပန်း ခင်းဧရိယာမှာ ဧက ၂၅၀၀၀နီးပါးရှိကြောင်း သိရ၏။
ထိုကဲ့သို့ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သော ကျူးလစ်ပန်း ခင်းများရှိရာသို့ စာရေးသူသည် မိသားစုနှင့်အတူ ယခုနှစ်ဧပြီလက အလည်ရောက် ဖြစ်ခဲ့ပါ၏။ မြို့တော် အမ်စတာဒမ်မှ မြို့ပြင်သို့ ၄၅မိနစ်ကြာ သွားရောက်ရုံဖြင့်ရောက် နိုင်သည့် ကမ္ဘာကျော် Keukenhof (ခရူးကန်းဟော့ဖ်)ပန်းခြံ၌ ကျူးလစ်ပန်းမျိုး စိတ်ပေါင်းများစွာသာမက အခြားပန်းရောင်စုံများစွာကိုပါ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာတွေ့ မြင်ခဲ့ရပါ၏။
ထိုပန်းခြံသည် Lisse မြို့ငယ်လေးတွင် တည်ရှိ၍ ကမ်္ဘာ့အကြီးဆုံးပန်းခြံများ အနက် တစ်ခုဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ ၇၉ဧက ကျယ်ဝန်းသည့် ထိုပန်းခြံ၌ နှစ်စဉ် ပန်းဥ ပေါင်း ၇သန်းနီးပါး စိုက်ပျိုးထားပြီး ကျူးလစ်ပန်းအမျိုးပေါင်းမှာ ၈၀၀ကျော်ရှိပါသည်။ Keukenhof ပန်းခြံ၏ အမည်မှာ မီးဖိုချောင်ပန်းခြံဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး Garden of Europe (ဥရောပ၏ ပန်းခြံ)ဟူ၍လည်း ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိပါသည်။ မီးဖိုချောင်ပန်းခြံဟု အမည်တွင်နေခြင်းမှာ ၁၅ရာစုဝန်းကျင်က ထိုပန်းခြံနေရာသည် မြို့စားကတော်ကရဲတိုက်ကြီး၏ မီးဖိုဆောင်အတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များက စိုက်ပျိုးဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါ၏။ နောက်ပိုင်း၌ ကြွယ်ဝသောကုန်သည်များ ထိုမြေများ ဝယ်ယူပြီး ၁၉၄၉ခုနှစ်၌ Lisse မြို့တော်ဝန်မှ ပန်းခြံအဖြစ်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပန်းခြံဖွင့်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ နယ်သာလန်နိုင်ငံနှင့် ဥရောပနိုင်ငံတဝန်းရှိ ပန်းစိုက်ပျိုးသူ များအနေဖြင့် မိမိတို့ဖန်တီးထားသော မျိုးစိတ်အသစ်များပြသနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံ၏ အဓိက စီးပွားရေးဖြစ်သည့် ပန်းပင်ကုန်သွယ်တင်ပို့မှုကို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ရန် ဖြစ်ပေသည်။
ထိုပန်းခြံကြီးကို ပန်းများပွင့်သည့်ကာလဖြစ်သည့် မတ်လလယ်မှ မေလလယ် အထိ တစ်နှစ်လျှင် နှစ်လသာ ဖွင့်လှစ်ပြသလေ့ရှိပြီး ကျွန်မတို့ရောက်ခဲ့သည့် ဧပြီလလယ်သည် ပန်းများအစွမ်းကုန်ပွင့်ဖူးဝေဆာသည့် ကာလဖြစ်ကြောင်းသိရပါ၏။ ပန်းဥယျာဉ်ကြီးအတွင်း၌ အရောင်အသွေးစုံလှသော ပန်းပွင့်လေးများ သူ့ထက်ငါ အလုအယက် ဖူးပွင့်နေကြသလို မွှေးပျံ့သော ရနံ့များကြောင့်လည်း စိတ်ကြည်လင် လန်းဆန်းစေပါ၏။ လှပသော ပန်းခင်းများအပြင် ပန်းဝင်္ကပါ၊ ၁၇ရာစု၊ ၁၈ရာစုများက ရှေးဟောင်းကျူးလစ်မျိုးစိတ်များကို တွေ့မြင်နိုင်သည့် သမိုင်းဝင်ပန်းဥယျာဉ်၊ ကြွေထည်များနှင့် အလှဆင်ထားသည့် ပန်းဥယျာဉ်စသည့် ဒီဇိုင်းမျိုးစုံပုံဖော်ထားသည့် ပန်းဥယျာဉ်များကိုပါတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် သက်ဆိုင်ရာ အဆောက် အအုံများ၌ ကျူးလစ်ပန်းသမိုင်းကြောင်းနှင့် ဗဟုသုတရဖွယ်ရာများ၊ သစ်ခွပန်းပင် များ၊ ပန်းအလှဆင်ပုံအမျိုးမျိုးကိုပါ ပြသထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ပန်းဥယျာဉ်၏ ယခုနှစ်Theme ဖြစ်သည့် “ရွှေခေတ်ကို ပန်းရောင်စုံများနှင့် ပုံဖော်ထားသည်ကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ပန်းခြံတွင်း၌ ကလေးများအတွက် ကစားကွင်း၊ တိရစ်္ဆာန်ရုံအသေးစားနှင့် ပန်းဝင်္ကပါများလည်း ဖန်တီးထားပါသည်။ ပန်းဥယျာဉ် အပြင်ဘက်ရှိ မျက်စိတစ်ဆုံးမြင်ရသည့် ကျူးလစ်ပန်းခင်းကြီးတွေကြား ၄၅မိနစ်ကြာ လှေစီးနိုင်သလို ကိုယ်တိုင်စက်ဘီးစီးပြီးလည်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ပန်းခြံသို့ အမ်စတာဒမ်မြို့မှ နေ့ဝက်ခရီးများ စီစဉ်ပေးပြီး မြို့မှ အသွား အပြန် ကားခနှင့် ဝင်ကြေးအပြီး ငါးနားရီခရီးကို တစ်ယောက်လျှင် ၄၉ယူရို ကျသင့်ပါသည်။ ပန်းခြံတွင်း၌ ကိုယ်ပိုင်အချိန် သုံးနာရီကျော် လေ့လာခွင့်ရသောကြောင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါက မဖြစ်မနေ သွားရောက်လေ့လာ သင့်ပါ ကြောင်း လက်ဆောင်စကားပါးလိုက်ရပါ၏။
October 6, 2015 April 21, 2021 Posted in Europe, Switzerland, TravelTagged BizzareHotel, Europe, Experience, Jail, JailHotel, Lucerne, Nu Myat around the World, Switzerland, WierdHotel2 Comments
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်မ အကျဉ်းထောင်ထဲ၊ အကျဉ်းခန်းထဲ နှစ်ညတာ ကုန်ဆုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်မှ နယ်နယ်ရရ အကျဉ်းထောင် မဟုတ်ဘူးနော်။ Switzerland နိုင်ငံက အကျဉ်းထောင်ထဲမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ရာဇဝတ်မှု ကျူ းလွန်လို့လည်း မဟုတ်၊ အကျဉ်းကျခံရလို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ Tourist တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ။ Tourist အနေနဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲ ဝင်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတော့ နားရှုပ်သွားမယ် ထင်တယ်နော်။ သူများနိုင်ငံသွားပြီး မဟုတ်တာ ဘာသွားလုပ်ခဲ့လို့လည်း ဆိုပြီးလည်း တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့။ ဖြစ်ပုံကဒီလိုပါ။
၂၀၁၀ခုနှစ် သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်တုန်းက ပိတ်ရက်ရှည်ရတာနဲ့ ပြည်ပခရီးထွက်လေ့ရှိတဲ့ ကျွန်မတို့ မိသားစု ဥရောပ ၅နိုင်ငံကို ၁၀ရက်တာ ခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပုံမှန်ဆို ရန်ကုန်ကနေ Package Tour ဝယ်ပြီး သွားလေ့ရှိပေမဲ့ အဲဒီနှစ်မှာတော့ အသစ်အဆန်းလေးဖြစ်သွားအောင် ကိုယ့်အိတ်ကိုယ်ဆွဲပြီး Backpacking Tourist တွေလိုသွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဥရောပနိုင်ငံတွေအနှံ့ ပြေးဆွဲတဲ့ Eurorail ရထားတစ်ခုပြီး တစ်ခုပြောင်းစီးပြီး တစ်နိုင်ငံဝင် တစ်နိုင်ငံထွက် ချီတက်ခဲ့ကြတာပါ။ အသိ Tour Company တစ်ခုက သွားမယ့်နိုင်ငံတွေ အလိုက် Hotel တွေ ကြို Booking လုပ်ပေးထားပြီး Booking လုပ်ပေးထားတဲ့နေ့တွေအလိုက် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေက သက်ဆိုင်ရာ Hotelတွေ ဆီရောက်အောင် သွားခဲ့ရတာပါ။
Lake Lucerne လှပလွန်းတဲ့ လူဆင်းမြို့လေး
Train station of Lucerne, Switzerland လူဆင်းဘူတာ
ဆွဲထားတဲ့ ခရီးစဉ်အရ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ ကို လေယာဉ်ဆိုက်ပေမဲ့ ပဲရစ်ကို နောက်ဆုံးမှ လည်မယ်ဆိုပြီး ဆွစ်ဇာလန်ကို ခရီးမရောက်မဆိုက် ရထားနဲ့ ဆက်ပြီးထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ အေးချမ်းတဲ့ မြို့လေးတစ်မြို့ ဖြစ်တဲ့ လူဇင်း (Lucerne) မြို့ကိုပါ။ လမ်းမှာ စိမ်းစိုလှပရှင်းသန့်တဲ့ ဆွစ်ဇာလန်ရှုခင်းတွေခံစားရင်း ဥရောပခရီးစဉ်ကို စခဲ့ကြတာပေါ့။ လေယာဉ်တွေ အဆင့်အဆင့်စီးပြီး ကားတစ်တန် ရထားတစ်တန်နဲ့ ခရီးနှင်ခဲ့ရတော့ လူဆင်းမြို့ရောက်ရင် တစ်ဝကြီး အနားယူပစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီး ကျွန်မတို့ အားလုံး အားခဲထားကြတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း လူဆင်းလည်းရောက်ရော ခဲလေသမျှ သဲရေကျခဲ့ရပါတယ်။
လူဆင်းဘူတာမှာ ရထားလည်းဆိုက်ရော စီစဉ်ထားတဲ့ Hotel ကို သွားဖို့ စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါ ဘူတာဝန်ထမ်းက နီးနီးနားနား လမ်းလျှောက်သွားရုံနဲ့ ရောက်တယ်ဆိုပြီး မြို့မြေပုံပေါ် လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မတို့လည်း ကိုယ့် Luggage ကိုယ်ဆွဲပြီး ဟိုတယ်ရှာပုံတော် ဖွင့်ခဲ့ကြတာပေါ့။ Lucerne မြို့လေးက သေးတဲ့ အပြင် မြို့လည်က ရေကန်ကို အခြေခံပြီးဖွဲ့ စည်းထားတော့ Taxi ဌားရင်တောင် မရနိုင်ပါဘူး။ Taxi အလွန်ရှားပါတယ်။ မြေပုံအရ ရေကန်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး တစ်ဖက်ကမ်းရောက်အောင် အထုပ်တွေအပိုးတွေသယ်ကာ မနည်းသွားရပါတယ်။ ဒီကြားထဲ လမ်းတွေမှားပြီး ဟိုတယ်ကလည်း ပျောက်နေတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ မြေပုံမှာပြထားတဲ့နေရာ ရောက်နေပေမဲ့ ဟိုတယ်နဲ့ တူတဲ့အရိပ်အယောင်တောင် မတွေ့ရပါဘူး။ ဥရောပနယ်မြို့လေးတွေမှာ ညနေဘက်တွေ အေးလို့ အပြင်ထွက်လေ့မရှိတာကြောင့် လမ်းမေးရမယ့် ဒေသခံတွေလည်း တစ်ယောက်မှ မတွေ့ရပါဘူး။
လမ်းပျောက်လည်းရောက်တဲ့နေရာမှာ ရိုက်တာပဲ 🙂
ဒါနဲ့ ဟိုတယ်နာမည်နဲ့လိပ်စာ အရ ရောက်နေတဲ့ အဆောက်အအုံထဲ ဝင်မေးကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှ ဒါကျွန်မတို့တည်းရမယ့် ဟိုတယ် ဖြစ်နေတာကို သိလိုက်ရပါတယ်။ ဟိုတယ်ပုံလည်းမပေါက် ဆိုင်းဘုတ်လည်းမတပ်ထားတော့ ကျွန်မတို့ မျက်စိလည်နေတာပါ။ ဟိုတယ်မှ ဘုရားစူးဟိုတယ်ပါ။ ဟိုတယ်နာမည်ကိုက Jail Hotel တဲ့လေ။ အရင်က အချုပ်ထောင်ကို ဟိုတယ် အဖြစ် ပြန်ဖွင့်ထားတာမှန်း နောက်မှ တဖြည်းဖြည်း သိလာရတာ။ တည်းခိုသူတွေ အကျဉ်းထောင် ရောက်နေသလို ခံစားရအောင် ဟိုတယ်ခန်းတွေကို အရင် အချုပ်ခန်းတွေ အတိုင်းပဲ ထားထားတာတဲ့။
The former prison doors are still used as the room doors
Interior of the hotel room
အခန်းကျဉ်းကျဉ်းထဲ ပရိဘောဂဆိုလို့ နှစ်ထပ်ကုတင်နှစ်လုံး သစ်သားကုလားထိုင် တစ်ခုံပဲ ပေးထားတယ်။ ရေချိုးခန်းအိမ်သာ တွဲရက်ပါပေမဲ့ တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာ အကျဉ်းဆုံးပါပဲ။ မီးလုံးကလည်း အဝါရောင် မီးသီးမှိန်မှိန်တစ်လုံးပဲ ထည့်ပေးထားတော့ ကျောချမ်းစရာပေါ့။ အခန်းတံခါးတွေကိုလည်း ၂ထပ်တံခါးအဖြစ် အကျအနခတ်ထားလို့ ထောင်သဏ္ဍာန်ပို ပီပြင်စေပါတယ်။ ကော်ရစ်ဒါမှာကအစ ထောင်သမိုင်းတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ထောင်ဝတ်စုံတွေ၊ ထောင်တွင်းသုံး လက်နက်ကိရိယာတွေကိုပါ ခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်။
The items used in former jail are displayed in the corridor
နောက်ထူးဆန်းတာတစ်ခုက ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းဆိုလို့ မနက်တစ်ယောက် ညတစ်ယောက် စုစုပေါင်းရယ်မှ ၂ယောက်ထဲတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Receptionist လည်းသူ၊ Bellboy လည်းသူ၊ ယုတ်စွအဆုံး မနက် Breakfast စားတဲ့အခါမှာ Waiter ကလည်း သူဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်ပါတော့။ တမင်ခြောက်ခြားအောင် လူအပိုမခန့်တာလား။ Human Capacity ကို အပြည့်အဝအသုံးချတာပဲလားတော့ မသိပါဘူး။ လူရှင်းရတဲ့အထဲ ဟိုတယ်ကော်ရစ်ဒါမီးတွေကိုလည်း လူဝင်လာမှ အလိုအလျောက်ပွင့်လာတဲ့ Auto စနစ်ကို သုံးထားတော့ မှောင်မှောင်မဲမဲထဲ မီးတွေ ဖြည်းဖြည်းချင်းပွင့်လာတာ တကယ်ပဲ ခြောက်ခြားစရာကောင်းပါတယ်။ ဟိုတယ်မှာ ဓာတ်လှေကားလည်း မထားထားတော့ ခရီးပန်းရတဲ့အထဲ ဒုတိယထပ်က အခန်းထဲထိ ကိုယ့်အထုပ်ကိုယ် မနည်းမ သယ်ခဲ့ရတာလည်း မှတ်မှတ်ရရပါပဲ။
လေယာဉ်တစ်တန် ကားတစ်တန် ရထားတစ်တန်နဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်း သွားခဲ့ရတဲ့ ဥရောပခရီးစဉ်ရဲ့ပထမဆုံးညကို အကျဉ်းခန်းထဲ ကုန်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မတို့မိသားစုအဖြစ်ကို ပြန်တွေးကြည့်တိုင်း ရယ်ချင်မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ပုံမှန်ဟိုတယ်ခန်းတွေက ခွဲထွက်ပြီး ဆန်းကြယ် ခြောက်ခြားဖွယ် အတွေ့အကြုံတွေပေးစွမ်းခဲ့တဲ့ Jail Hotel မှာ တည်းခဲ့ရတဲ့ နှစ်ညတာဟာ ကျွန်မရဲ့ ခရီးသွားအတွေ့အကြုံတွေထဲ ဘယ်တော့မှ မေ့မရနိုင်မယ့် အတွေ့အကြုံသစ်ဖြစ်စေခဲ့တာကတော့ ကျေနပ်စရာပါပဲ။
The only staff in the hotel
ဟိုတယ်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ဝန်ထမ်း
Breakfast in the jail
Lobby မှာထားပေးထားတဲ့ လက်လှည့်ဘောလုံးကစားနည်း။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကစားနေကြ ကစားနည်းလေးဆိုတော့ ခုလိုမထင်မှတ်တဲ့နေရာမှာ ပြန်တွေ့ရတာ သိပ်ပျော်တာပေါ့
With my mom & sisters